शरणार्थीका लागि शीर्ष दस जब - व्यक्तिगत हेरविचार, सेवा र मर्मतका को कार्य | USAHello | USAHello
शरणार्थीका लागि शीर्ष दस जब – व्यक्तिगत हेरविचार, सेवा र मर्मतका को कार्य
विभिन्न उद्योग व्यक्तिगत हेरविचार, सफाई र मर्मतका को कार्य विभाजन. तर सबै जब महत्त्वपूर्ण सेवा प्रदान.
यस जब दोकान र चाइल्डकैअर लागि सफाई र सम्पत्ति को मर्मतका सबै कुरा समावेश. यस प्रकारका सेवाहरूको कार्य धेरै प्रमाणपत्र वा उच्च शिक्षा आवश्यक छैन. तर भुक्तानी( तलब) राम्रो छैन.
व्यक्तिगत हेरविचार, प्रत्यक्ष सेवा, सफाई र मर्मत कार्य सबै उपलब्ध काम धेरै संग क्षेत्रमा बढ्दै छन्. यो धेरै कारण छन्:
संयुक्त राज्य अमेरिका को जनसंख्या को एक वृद्धि नम्बर र थप हेरविचार आवश्यक.
मान्छे व्यायाम र व्यक्तिगत हेरविचार थप समय र पैसा खर्च.
अन्य मान्छे जस्तै कुकुर हिड्ने किनमेल रूपमा आफ्नो दैनिक काम गर्ने उच्च आय संग मान्छे पैसा तिर्न तयार हुन्छन्.
धेरै मानिसहरू जस्तै वृद्ध वा असक्षम को सफाई र हेरविचार रूपमा प्रत्यक्ष सेवा, गर्न चाहँदैनन्.
तपाईं मिसिन र रोबोट सजिलै यी कार्यहरु धेरै मानिसहरू प्रतिस्थापन गर्न सक्छ.
पशु हेरविचार – पाल्तु जनावर हेरचाह गर्ने जनावर आनन्द मान्छे को लागि एक बढ्दै क्षेत्र.
परिचारक– सेवाहरूको वर्तमान प्रावधान र थिएटर, मनोरञ्जन स्, क्यासिनो र मनोरञ्जन पार्क मा सार्वजनिक पुस्तिका.
छोराछोरीको हेरविचार – बाल हेरविचार को क्षेत्र मा कामदारहरूको लागि मांग दिन हेरविचार, विद्यालय र निजी घरमा केन्द्र मा बढ्दै छ.
विशेषज्ञ कस्मेटिक – छाला हेरविचार मान्छे र सौन्दर्य उपचार को सबै प्रकार प्रदान गर्दै एक बढ्दै उद्योग.
फिटनेस र मनोरञ्जन – काम को मनोरञ्जन क्षेत्रको फिटनेस trainers र नेताहरूले बढ्दै छन्.
हेयर स्टाइलिस्ट – कट कपाल डिजाइन प्रत्येक राज्य को लागि प्रशिक्षण र प्रमाणीकरण आवश्यक.
Housekeeper घरहरू र नौकरानियां – निजी घरमा र होटल मा सफाई र अन्य घरेलू कार्यहरू प्रदर्शन गर्ने व्यक्ति अक्सर घण्टा काम गर्न बाध्य छन् सामाजिक छ.
Gatekeeper – ठूलो भवनहरु मा भारी सफाई र मर्मतका को जिम्मेवारी कसले प्रदर्शन व्यक्ति. यो काम रिक्तियों को बढती संख्या अवस्थित कि काम हो.
हरियो बगैचा अन्तरिक्ष विशेषज्ञ – हेरविचार र यस्तो ठूलो भवन, सार्वजनिक पार्क आसपास क्षेत्रमा रूपमा ठूलो वर्गहरूको र landscaped क्षेत्रमा सिर्जना गर्न, विदेश काम.
मैनीक्योर / pedicurist – यसलाई व्यावसायिक प्रशिक्षण र केही प्रमाणीकरण नङ कामदारहरूको काम आवश्यक.
व्यक्तिगत हेरविचार सहायक – जस्तै वृद्ध रूपमा, भौतिक सहयोगको आवश्यकता पर्दछ मानिसहरूलाई हेरचाह. यो सबैभन्दा छिटो बढ्दै व्यवसायहरुको मध्ये एक छ.
पर्यवेक्षक – त्यहाँ Housekeeping टोली Landscaper र मर्मतका टोली maintainers टोली वा तिनीहरूको प्रबन्धकहरू धेरै समन्वय र आफ्नो काम निगरानी छ.
व्यक्तिगत सेवा र मर्मतका कार्य मेरो लागि उपयुक्त गर्छ?
यो धेरै विविध कार्यहरु, त्यसैले धेरै क्षेत्रमा एक लागि उपयुक्त हुन सक्छ. तपाईं यो माथिको सूची पढेर देख्ने छैन कार्यालय को कार्य हो. यो भन्दा मान्छे कार्यालयमा हुन वा कम्प्युटरमा धेरै समय खर्च गर्न चाहँदैनन् फिट. तिनीहरूलाई केही यस्ता doorman, माली, र फिटनेस प्रशिक्षक रूपमा शारीरिक काम, धेरै आवश्यक.
व्यक्तिगत हेरविचार र बाल हेरविचार को कार्य मानिन्छ छैन धेरै शारीरिक समारोह. तिनीहरूले प्रेम र हेरचाह गर्ने आफ्नो धैर्यता र राम्रो लागि चिनिएका अरूलाई मान्छे फिट. साँझ काम गर्न आवश्यक छ जसले विद्यार्थी वा अरूको लागि कार्यालय सफाई केही राम्रो काम सम्बन्धित जब. दोकान र सौन्दर्य सेवा र सेवाहरू पाल्तु जनावर व्यवसाय स्वामित्व चाहने कसैले लागि राम्रो हुनेछ.
भैंसी, न्यूयोर्क, र अन्य पूर्व शरणार्थी मा एक सौंदर्य को दोकान को मालिक आफ्नै व्यवसाय सुरु बारेमा कुरा गर्दै हेर्नुहोस्
स्थानीय पुन resettlement वा स्थानीय समुदाय संगठन संगठन मदत खोज्न
तपाईं शरणार्थी हो भने, तपाईंले एजेन्सी तपाईंको आफ्नै भर्ती कार्यक्रम को पुन स्थानीयकरण दावी गर्न सुरु गर्न सक्नुहुन्छ. यस्तो होटल धेरै संगठन र प्रवासिहरु स्थानीय हाकिमहरूले संग सम्बन्ध resettlement,. तिनीहरूलाई केही प्रशिक्षण पनि कार्यक्रम प्रस्ताव काम.
होटल पढ्न शरणार्थी को भर्ती एक स्मार्ट कदम हो भनेर विश्वास गर्ने
व्यक्तिगत सेवा, सफाई र कुनै पनि प्रशिक्षण को मर्मतका को कार्यक्षमता आवश्यकता छैन. उदाहरणका लागि, हाउसकिपरको एक पर्यवेक्षक वा काम सहयोगी द्वारा काम मा एउटा नयाँ घर थिएटर वा नयाँ पर्यवेक्षक प्रशिक्षण हुनेछ.
तपाईं नजिकै कक्षाहरू लागि खोज
मर्मतका कार्यहरु र अन्य सेवा केही प्रशिक्षण आवश्यक. सामुदायिक कलेजहरु क्लीनर लागि उपयोगी प्रणालीको निर्माण र मर्मतका मा पाठ्यक्रम प्रस्ताव. तिनीहरूले पनि भूनिर्माण, दोकान र छाला हेरविचार मा पाठ्यक्रम प्रस्ताव.
तपाईं नजिकै एक समुदाय कलेज खोजी
कपाल र सौन्दर्य
धेरै बाल र सौन्दर्य विशेष विद्यालय पनि छन्. एक कस्मेटिक स्कूल को अमेरिकी संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खोज्न. यो Mr_khaso नङ, आफ्नो मामलामा लाइसेन्स कपाल र सौन्दर्य हुनुपर्छ.
आफ्नो राज्य मा लाइसेन्स आवश्यकताहरु को लागि खोज
तपाईं घरमा छोराछोरीलाई हेरचाह गर्न इजाजतपत्र आवश्यक छैन, तर एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अनलाइन तपाईं जागिर पाउन मदत गर्न सक्छ. रातो क्रस तपाईं अनलाइन गर्न सक्छन् बच्चाहरु को हेरविचार को लागि एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम विकास भएको छ. तपाईं प्रमाणपत्र प्राप्त हुनेछ.
रातो क्रस अनलाइन बच्चाहरु को हेरविचार मा प्रशिक्षण प्रदान
तपाईं गर्नुपर्छ GED?
तपाईंलाई मदत गर्न कुनै पनि संगठन छन् भने, तपाईं सुरु गर्न सक्नुहुन्छ लागि उच्च मांग संग जब लागू गर्नुपर्छ. सरकार रोजगार केन्द्र मुक्त. सल्लाह प्रदान गर्न र स्थानीय जब सूची राख्न. तिनीहरूले CVS र व्यापार आवेदन मदत छन्. तपाईं रोजगारी र शिक्षा प्रशिक्षण को केन्द्र Aousolk गर्न सक्नुहुन्छ.
केश र सौन्दर्य मा क्यारियर पथ